GW 501516 / Cardarine Macluumaadka aasaasiga ah | Alaab iibiyeyaasha AASraw
/blog/Kaararin , GW 501516/GW 501516 / Cardarine Macluumaadka aasaasiga ah
Posted on 01 / 04 / 2018 by 阿斯劳 ku qoray Kaararin, GW 501516.
GW 501516 / Kaararin Qeybaha iyo Baaskiilka
1.GW 501516 / Cardarine Macluumaadka aasaasiga ah 2.Waa maxay Cardarine loo isticmaalo?
3.Cardarine: Daaweynta Cayilka? 4.Ururin ku saabsan Fiber Muscab
5.GW 501516 / Cardarine Dosages and Cycling 6.Health Benefits of Cardarine / GW501516
7 Khataraha Dabiiciga ah / Saameynada Lacageed 8.Cardarine / GW501516 Cuntada
9.Cardarine / GW501516 Raw Powder Calaamadaha aasaasiga ah: 10.How si aad u iibsatid GW501516 / Cardarine cayriin caan ka ah AASraw?
1.GW 501516 / Cardarine Macluumaadka aasaasiga ah
Kaararin (GW-501516) waa daroogo oo ku xidhan garsoorka PPAR. Waxaa markii ugu horreysay abuuray Glaxo Smith Kline iyo Pharmaceuticals in Ligandiga 1992. Waxaa la ogaadey in Cardarine, marka loo xakameynayo garsooraha PPAR, wuxuu qortaa waxa loo yaqaan "PGC-1aenzyme", ka dibna wuxuu kordhiyaa muujinta gen ee ku lug leh kharashka tamarta. Jiirarka lagu daaweeyo Cardarine waxaa lagu muujiyay inay sii kordhayaan dheef-shiid kiimikaadkoodu badan yahay iyo kor u kaca badan ee cayilan ee cunista cuntada xun, iyo sidoo kale difaaca kordhay nooca-2. Daraasad kale oo ku saabsan dareenka Rhesus, karkarin ayaa lagu muujiyay inuu kordhinayo HDL (kolestarool wanaagsan) oo la yareeyo LDL (kolestarool xun). Sababaha saameyntani waxay u egtahay inay sababtay kororka kor u qaadista gaadiidka kolesteroolka ABCA1. Si kale haddii loo dhigo, koofiyadu waxay u hawlgalaan jidka isku midka ah ee ku lug leh jimicsiga. Intaa waxaa dheer, karkarin ayaa la baaray si loogu isticmaalo daaweynta cudurka wadnaha ka hor intaanay horumarkiisa la joojin 2007.
2.Waa maxay Cardarine loo isticmaalo?
Kaararin wuxuu ku fiican yahay wax kasta oo qurux badan! Faa'iidooyinka adkaysiga aan la rumaysan karin ayaa laga yaabaa inay tahay sababta ugu caansan ee loo isticmaalo sheygan. Kaliya maahan inay cadeysay inay kordhiso adkeysiga daraasadaha sayniska, laakiin markaad adigu u isticmaasho naftaada waxaad arki laheyd in natiijooyinka aysan aheyn wax cajiib ah! Haddii aad tahay qashin wadnaha ama sida aad u jilicsan tahay, waxay kordhineysaa waqtiyadaada orodka. Kulamadaaga culeyska kor u qaadista waa la sii dheereyn doonaa, waxaad dareemi doontaa firfircooni dheeri ah ugu dambeyntiina waxaad heli doontaa shaqo badan oo badan intaadan jimicsiga ka bixin maalin kasta.
Dabcan, luminta dufanka ayaa ku jirta liiska ugu sarreeya ee sababaha dad badani u jecel yihiin Cardarine aad u badan. Cadaadisyada iyo xididdada ayaa si muuqata loo dareemayaa safarkaaga dufanka lumayna wuxuu noqdaa mid aad ufudud badan, iyada oo aan la helin saamaynta kicinta ee ay leeyihiin inta badan dufanka guba iyo daroogooyinka ay yeelan karaan inta ay hoos isu dhigayaan Dhimista dufanka ee kaararka dhiiggu waa natiijada ka soo baxda muruqa lafaha. Asal ahaan, waxaad sifiican uga faa'iideysaneysaa nafaqooyinka aad isticmaashid maalin kasta waxaadna yareyneysaa xaddiga karbohaydraytyada ama dufanka ku keydsan unugyada adipose. Natiija ahaan, kaardarin ma aha oo kaliya dufanka gubanaya iyo anti-catabolic, laakiin sidoo kale waa wax yar oo anabolic ah sidoo kale.
Sidee loo isticmaalaa budada karkarin? Cardarine waxaa lagu dhejin karaa wax badan oo qurux badan, wuxuuna kor u qaadi doonaa natiijooyinka wareegga. Dadka isticmaala stomoid anabolic-androgenic ee jecel daroogada trenbolone, cardarine waa mid fantastik ah marka laysku haleynayo saameynta xun ee "tren" iyo xitaa kor u qaadista saameynta wanaagsan.
3.Kaararin: Daaweynta Cayilka
HOGAANKA HORUMARINTA waa awoodda GW awooddiisa inuu ka saaro jirka unugyada dufanka aan la rabin oo ay ku dhawaatay inay ku dhowaato. Xeryahooda kiimikada ee khatarta ah ee udubdhexaadka ah ee PPAR waxay ka shaqeysaa kala duwanaanta adipocytes.
Inta badan hormoonada koritaanka, budooyinka looxa sida GW 501516 waxay abuurtaa calaamadaha nuucyada lidka ku ah ee ku jira unugyada dabiiciga ah iyo hoos u dhaca waxqabadka gen ee ku lug leh lipogenesis. Tani waxay ka dhigan tahay in jirka uu awood u leeyahay inuu xiro silsilado cadcad leh oo isku dhafan oo sameysma oo lagu keydiyo dufan.
Daraasad cilmiyaysan oo ka soo baxday 2015 ayaa lagu sheegay
'GW501516 wuxuu wax ka qabtaa unugyada PPAR-ga oo si khaas ah loo isticmaalo dufanka jidhka sida tamarta si la mid ah jidhka uu u sii wadi lahaa' habka gaajada '.
Daraasadan waxaa lagu soo xigtay: 'Faytoobiinka iyo fayaqooshiciyada ee PPAR iyo qaababka cusub ee soo saarey si loo daaweeyo cudurada dheef-shiid kiimikaadka'.
Dhiirigelinta unugyada noocaas ah ee jidhka ayaa loo arkay in ay gubaan dufanka jidhka ee heerka cabsida leh ee loo yaqaan 'daawo cayil'.
Ma jiraan wax saameyn ah oo liddi ah oo lagu arko sannadihii ugu dambeeyay ee 20 ee daraasaddan, waxayna ahayd arrin aad dhif u ah in la arko muruqa bakhaarada meel kasta oo lagu jiro cilmi baarista.
4.Ururin ku saabsan Fiber Muscab
Daraasadda 2015 by Wei Chen, PhD iyo jaamacaddiisa ayaa sidoo kale ogaatay in kororka baaxada leh ee hiddaha PPAR ee tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah uu kordhiyaa isticmaalka oksijiinta waxayna si weyn u kordhisaa dulqaadka. Dareemis sii ballaaran ayaa lagu arkay jiirarka raajada oo leh oksijiin caadi ah iyo kuwa leh xayiraadyo oksijiin ah oo bixisay caddayn cad oo ah in GW501516 bartilmaameed iyo kor u qaadista adkeysiga muruqa iyo waqtiga soo kabashada si heer sare ah.
Daraasad lagu magacaabo 'Daraasad dheef-shiid kiimikaad ah oo lagu magacaabo PPARP agonist GW501516 si loogu xoojiyo adkaysiga dulqaadashada ee jiirka Kunming' ayaa sheegay in BCAA ay ka baxeen intii lagu jiray tijaabooyin jimicsi xooggan taas oo u ogolaatay jiirarka in ay yeeshaan tiro badan oo ah soo kabashada musqulaha muruqyada iyo neurotransmitters.
Jiirkaas ayaa xitaa lumay miisaanka iyadoo la ilaalinayo cunto dufan badan, taasoo tilmaameysa in ay suurtagal tahay in ay ka hortagaan buurnaanta oo ay gacan ka geysato miisaanka maareynta iyada oo aan loo eegin caadooyinka cunnida.
5.GW 501516 / Dosarine iyo Baaskiil
Qiyaasta ugu sareysa ee ugu sarreeya waa 20mg maalin kasta si loo helo faa'idada ugu sareysa ee laga yaabo in Cardarine uu bixiyo. Si kastaba ha ahaatee, weli waxaan arkay natiijooyin aad u macquul ah iyo saameyn ka yimid qiyaaso sida hooseeya 10mg.
Waxaa lagula talinayaa in aad bilowdo 10mg oo aad ku qiimeyso sida aad dareemeyso, iyo haddii aad dareento inaad u baahan tahay kor u kaca, ku xeji 15-20mg maalintii.
Nolosha nusku waa saacadaha 24 sidaa darteed waqtigaada daaweyntaada maalin kasta waa mid aad u qoto dheer, inkastoo, qaar ka mid ah dadka isticmaala u muuqda in ay helayaan qiyaasta daaweynta 30-60 daqiiqo ka hor inta aan la helin koritaanka.
Ilaa inta aad qaadanayso qiyaastaada maalin kasta waxay ugu dambeyntii qaadataa mudnaanta weyn, laakiin haddii aad doorato inaad qaadato ka hor tababarku wuxuu ku xiran yahay adiga oo ku salaynaya mudnaantaada shakhsi ahaaneed.
Wareeg ah waa in ay meel kasta ka socotaa toddobaadka 8-16. Kadib markaa dhibicda (16 usbuucyada), waxaad si dhab ah u bilaabi doontaa inaad ogaato inaad yareysid canshuur celinta, waxaadna u baahan doontaa inaad bakhtiiso oo aad qaadato bil ka hor inta aadan bilaabin mar kale Cardarine.
Inkasta oo Cardarine aan la xakameynin wax kasta, ama uu sameeyo saameyno xun oo la og yahay, waxaa lagula talinayaa in loo rogo si fudud si looga fogaado soo noqoshada.
Sidee loo isticmaalaa budada karkarin? Ragga iyo haweenku ma isticmaali karaan Cardarine?
Haa, lab ama dhedig ayaa isticmaali kara.
Ma aha budada SARM; waa 100% aan cidhiidhi ahayn, waxayna keeneysaa saameynta xun ee loo yaqaan '0'.
Daaweynta haweeneyda waa inay la mid noqoto sida loo qaato nin. Dumarku waxay filan karaan faa'iidooyin isku mid ah nin uu ka heli lahaa dhismahan.
6.Health Benefits of Cardarine / GW501516
1) Kaararin wuxuu difaacaa Maskaxda
Xayawaanka, GW 501516 wuxuu difaacaa maraakiib maskaxeed marka ay ku jiraan diiqad maskaxda ah.
Furitaanka PPAR-ga ee GW 501516 ayaa kor u qaadi kara horumarinta unugyada dareemayaasha.
Waxaa intaa sii dheer, waxay ka hortagtaa in xidid la'aanta dhiigga, gaar ahaan maraakiibta maskaxda.
2) Cardarine wuxuu ka faa'iidaystaa wadnaha
Marka la barbardhigo kuwa kale ee budada ah ee SARMS, GW 501516 waxay ka hortagtaa dhaawaca qiiqa ee wadnaha.
Waxay hoos u dhigeysaa khatarta iyo darnaanta atherosclerosis (dhuumaha dhuxusha ee halbowlayaasha) iyada oo loo marayo qaabab badan. GW 501516 wuxuu kordhay heerarka nitric oxide, taas oo ka ilaalisa atherosclerosis.
Waxa kale oo ay yareyneysaa xanuunada iyo bararka la xidhiidha atherosclerosis ee jiirarka.
GW 501516 waxay kordhisaa wax soosaarka VEGF ee unugyada dhiigga ee dhiiga ee dhiiga, taasoo kicinaysa unugyada jirka iyo xididdada dhiigga.
GW 501516 waxay keentaa kororka kolestaroolka HDL iyo hoos u dhaca tignoolajiyada daraasaadka xayawaanka, taas oo hoos u dhigeysa khatarta cudurrada wadnaha iyo xididada ee bukaanka.
3) Karkarin wuxuu kordhiyaa dheef-shiid kiimikaadka iyo ka hortagga cayilka
GW 501516 wuxuu u hawlgalaa PPARi, taas oo kordhin karta burburinta asiidhda dufanka iyo kordhinta kharashka tamarta ee muruqyada. Tani waxay kaa caawin kartaa daawaynta cayil.
PPARe waxay kicinaysaa muujinta tiro badan oo ku lug leh hoos u dhigidda kolestaroolka iyo kordhinta kharashka tamarta. Daaweyntani waxa uu ka hortagi karaa miisaan ahaan sababtoo ah cunto.
Sidoo kale, GW 501516 wuxuu yareeyaa glucose-ka beerka oo wuxuu kordhiyaa dareemaha insulin ee jiirarka. Iyadoo la raacayo horumarinta murqaha maskaxda ee jiirarka, GW 501516 wuxuu abuuraa iska caabin ah cayilka.
4) Kaararin wuxuu difaacaa Kalluunka
In jiirarka, waxaa la muujiyey in la joojiyo inflammation ee unugyada kelyaha, iyo laga yaabaa inay ka ilaaliyaan cudurka kelyaha. Tani waxay ku sameeyneysaa hoos u dhigista muujinta MCP-1 kaas oo guud ahaan lagu kordhiyo cudurrada kalyaha sida.
5) Cardarine wuxuu caawiyaa Nidaamka Isku-xirka
GW 501516 wuxuu la xiriiraa xakameynta caabuqa.
Iskaashatada PPARsuppresses ee gubashada beerka ee xayawaanka by byfactors molecules kuwaas oo gacan ka geysta jawaabaha barar.
GW 501516 wuxuu kicin karaa PPARe kaas oo difaacaya unugyada maqaarka gaarka ah ee ka yimaada geerida unugyada dhimirka inta lagu jiro habka bogsashada nabarka. Waxaa sidoo kale la muujiyey in la dedejiyo xirka suufka macaanka.
6) Kaararinku wuxuu ka difaacayaa Dhibaatada beerka
GW 501516 wuxuu u keenaa beerka inuu ku beddelo ilaha tamarta ka soo gala sonkorta dhiigga ee dufanka leh, sidaas darteed hoos u dhigidda sonkorta dhiigga.
In jiirarka, GW 501516 wuxuu joojiyay IL-6, taas oo ka caawin karta kahortagga insulin-ta ee unugyada beerka. Isticmaalka gaaban wuxuu dib u dhigi karaa dhaawaca beerka kaas oo ay ugu wacan tahay cunto badan oo jajaban.
Sidoo kale, waxay hagaajin kartaa xanuunka beerka aan qamrada ahayn ee jiirka.
7) Karkarin wuxuu hagaajiyaa Kobaca Murqaha iyo Stamina
Dhaqdhaqaaqa PPAR-ga oo loo marayo GW501516 ayaa xoojiya kobcinta murqaha jiirka. Xuubyada muruqyada ee bukaanshaha ayaa lala xiriirinayaa waxqabadka muuqaalka jirka. Waxay awoodeen in ay ku ordaan laba jeer ilaa inta jiirarka kale, oo tilmaamaya adkaysiga hagaajinta.
8) Cardarine wuxuu caawin karaa bogsashada cudurada maqaarka
Dhaqdhaqaaqa PPAR-yada waxay hagaajin kartaa xanuunka keena cudurka psoriasis (maqaarka maqaarka).
9) Kaararin wuxuu hagaajin karaa bogga Dhiigga iyo Boogta Weedha
Iyadoo la adeegsanaayo PPARẟ, Cardarine wuxuu kordhin karaa soo saarista BH4, taas oo kor u qaadaysa wax soo saarka nitric oxide ee maraakiibta dhiigga (eNOS).
Kordhinta nitric oxide waxay ka caawisaa hagaajinta socodka dhiigga. Waxay kaloo caawisaa inta lagu jiro bogsashada boogta.
10) Kaararin wuxuu leeyahay Antioxidant iyo Dabacsanaan Maxkamad
Ma aha sida budada kale ee SARMS, Cardarine waxay kordhisaa soo saarida unugyada antioxidant enzymes SOD1 iyo catalase.
Waxa kale oo ay xakameysaa wax soo saarka maaddooyinka inflammatory sida MCP-1, TNF-alpha, IL-6, iyo NFBB. Dhibaatooyinka ka-hortagga bararka waxay hagaajin karaan fibrobar-yada ay sababaan caabuqa jiirka.
7 Khataraha Dabiiciga ah / Saameynada Lacageed
GW 501516 waxay kordhisaa geerida unugyada unugyada beerka waxayna sababi kartaa fibrosis jiirarka cudurka beerka.
Xayawaanka, waxaa jira halis suurtagal ah in la sameeyo dhulalka iyo koritaanka uur-ku-jirka iyo waqti dheer oo lagu soo rogo GW 501516.
Jiirka, GW 501516 wuxuu sababi karaa kansar. Ma jiraan daraasado ku filan bini'aadanku in ay muujiyaan saameyn isku mid ah.
GSK waxay ka tagtay horumarinta daroogada ee 2007 sababta oo ah baaritaanka xoolaha ayaa muujisay in daroogada ay sababtay kansar si dhakhso ah ugu soo baxaan dhowr xubnood.
Sababtoo ah GW 501516 wuxuu leeyahay saameyn ballaaran oo ka mid ah meelo badan oo jirka ka mid ah, waa inaad tixgelisaa dhibaatooyinka soo raaca ka hor inta aanad daaweynin sida daaweyn.
Markaas, sidee loo isticmaalaa budada karkarin?
8.Cardarine / GW501516 Cuntada
Ostarine (MK-2866) 25mg / ml cuntada dareeraha ah ee afka laga qaato:
15g Ostarine (MK2866) budo
600ml Khamriga la cuni karo
Andarine (S-4) 25mg / ml Cuntada dareeraha ah ee afka:
15g Andarine (S-4) budada
Gw-501516 (Cardarine) 10mg / ml Cuntada dareeraha ah ee afka:
10g Gw-501516 (Cardarine) budada
1000ml Khamriga la cuni karo
Dareeraha sida caadiga ah waxaa lagu kaydiyaa dhalooyinka dhibicda muraayada.
9.Cardarine / GW501516 Raw Powder Calaamadaha aasaasiga ah:
Magaca: GW501516 / Cardarine
Catalog: budada SARMS
Miisaanka Molecular: 453.498
Dhibcaha Dhibcaha: 134-136 ℃
Xalka: Biyaha (inyar), DMSO, Ethanol
Midabka: Cad uumi cadcad jilicsan
Macluumaadka Organoleptic: Cagaarka si aad u qurux badan, budo la'aan, dhadhan qadhaadh
Sida loo isticmaalo sida loo isticmaalo budada kookarinka, fadlan la tasho wakiilka iibinta.
10.How si aad u iibsatid GW501516 / Cardarine cayriin caan ka ah AASraw?
1.To nagula soo xiriir naga soo waca nidaamkayaga baaritaanka emailka, ama wakiilka adeegga macaamiisha ee Skype (CSR).
Waa maxay Cardarine Super? / 8 Faa'iidooyinka Kaararka Waxyaabaha 9 waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato bakeeriyada Cardarin !!! Budada Pregabalin: Waa maxay pregabalin loo isticmaalo?
Tags: budada kiniiniga, budada gw501516, sida loo isticmaalo budada abuurka
Fluoxymesterone / Dufanka Halotestin cayriin Hordhac (MK-677 Powder) Talooyinka Ibugamoren Isticmaalidda budada